बाबुराम भट्टराईको यस्तो कर्तुत बाहिरिएपछि महन्थ, राजेन्द्र र उपेन्द्र भए एकढिक्का, बाबुराम विचल्ली ! – hamrosandesh.com
बाबुराम भट्टराईको यस्तो कर्तुत बाहिरिएपछि महन्थ, राजेन्द्र र उपेन्द्र भए एकढिक्का, बाबुराम विचल्ली !
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नै गतिविधीले झड्का लाग्ने देखिएको छ । बाबुरामले पार्टीमा थाहै नदिई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुईपटक भेटेको तथ्य बाहिर आएपछि जसपामा गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
एमाले नेता महेश बस्नेतले खुलासा गरेपछि भेटेको तथ्य बाबुराम स्वयंले स्वीकारे । बस्नेतले प्रधानमन्त्री बनाइदिन हारगुहार गरेको पनि खुलासा गरे ।
बाबुरामले प्रधानमन्त्री भेटेको तथ्य बाहिर आएपछि उपेन्द्र यादव छाँगाबाट खसेजस्तै भए । पार्टी महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोविरुद्ध उपेन्द्रलाई उचालेर अन्तरद्वन्द्व चर्काइरहेका बाबुराम आफू भने ओलीको शरणमा सत्ताका लागि पुगेका थिए ।
बाबुरामको यो चाला बाहिर आएपछि उपेन्द्र सतर्क भए । उनले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग वार्ताको निर्णय गरे ।
जसरी एमालेमा प्रचण्डले कुरा लगाएर माधव नेपालले अन्तरसंघर्ष चर्काए । त्यसैगरी जसपामा बाबुरामले उपेन्द्रलाई कुरा लगाएर अन्तरद्वन्द्व चर्काएको चाल पाएपछि उपेन्द्रले आइतवार अध्यक्ष ठाकुरसँग वार्ता गरेका हुन् । एमालेमा अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालसँग वार्ता गरेर पार्टी एकबद्ध बनाएजस्तै उपेन्द्र पनि ठाकुरसँग मिलेर पार्टी एकताबद्ध बनाउने निष्कर्षमा पुगे ।
फलस्वरुप आइतवार भएको छलफलमा मिलेर जाने, पार्टीको संयुक्त बैठक राख्ने, बैठक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने सहमति भयो ।
जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य मोहम्मद इस्तिहाक राईका अनुसार अध्यक्षद्वयबीच पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर आधिकारिक लाइनअनुसार अघि बढ्न सहमति जुटेको छ ।
दुई अध्यक्षको बैठकमा नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध प्रचण्डले माधव नेपाललाई कुरा लगाउँदा समस्या भएको र जसपाको पनि त्यस्तो अवस्था हुनसक्ने भन्दै वार्ता गरेर अगाडि बढ्दा त्यस्ता भ्रम क्लियर हुने समझदारी पनि भएको छ । दुबै अध्यक्षले संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कुरा लगाउने गरेको निष्कर्ष निकालेको एक नेताले बताए ।
यसअघि एमालेमा प्रचण्डको बहकाउमा चल्दै आएका माधव नेपाल ओलीसँगको वार्तापछि क्लियर भएका छन् । उनी अहिले ओलीसँग कन्भिन्स भएका छन् । अहिले ओली र नेपालबिच भ्रम क्लियर भइसकेको भन्दै त्यसैगरी आफूहरु पनि मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको निष्कर्ष थियो ।
यता जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालमा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबिच वार्ता सफल भएको छ । आइतवार भएको छलफलमा मिलेर जाने, पार्टीको संयुक्त बैठक राख्ने, बैठक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने सहमति भएको बताइएको छ ।